Ụdị nri German a na-ahụkarị | Akụkọ njem
Mariela Carril | 23/12/2021 17:00 | Alemania, Gastronomy
Germany bụ obodo gọọmenti etiti nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite, yabụ nri ya na-ekpughere njem ọdịnala a. Ọ bụghị ihe a ma ama dị ka French, Italian ma ọ bụ Spanish, ma nke bụ eziokwu bụ na o nwere usoro nri na ọ bụrụ na ị na-aga njem ị ga-anwale ha.
Cheta na mpaghara ebe Germany dị bụ ọgaranya na omenala na ndị agbata obi ya enyela ihe ụfọdụ na-eme ka a na-akpụzi gastronomy German nke oge a. Ma taa, ahụkarị German efere.
1 Ọtụtụ ihe karịrị soseji na biya
7 sausaji German
Ọtụtụ ihe karịrị soseji na biya
Ihe mbụ na-abata n'uche mgbe anyị na-ekwu maka nri German bụ ihe abụọ a, ma o doro anya na German gastronomy bụ ọtụtụ ihe. N'ezie, ogologo akụkọ ihe mere eme nri nke mba ahụ metụtara mgbọrọgwụ ya na ọdịdị ala ya. Nri German etolitela kemgbe ọtụtụ narị afọ na aka na mgbanwe mmekọrịta ọha na eze na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, yabụ taa mpaghara ọ bụla nke mba ahụ nwere nri pụrụ iche na ụtọ ya pụrụ iche.
Dịka ọmụmaatụ, A maara ndịda nke mba ahụ maka efere anụ ezi, mgbe mpaghara gburugburu Hamburg kacha ewu ewu maka azụ. Nke bụ́ eziokwu bụ na anụ dị n’ọtụtụ efere ha, ma n’ehihie ma n’oge nri ụtụtụ.
A na-ahụkarị nri na-agụnye a òkè anụ, creamy sauce, ụfọdụ akwụkwọ nri na biya, ma ka anyị hụ ndị kasị ahụkarị efere, ndị na-ekwesịghị ịgbaghara.
Ọ bụ anụ anụ stew mbụ marinated na mmanya na dị iche iche ngwa nri. Ọ bụ nnukwu stew caloric na omenala na-eje ozi na-acha uhie uhie kabeeji na ndị dumplings nduku akpọ kartoffelklöbe ma ọ bụ sie poteto, dị nnọọ mfe.
Anụ ahụ nwere ike ịbụ ịnyịnya ma ọ bụ anụ anụ nke a na-agbanye na mmanya ọcha na ngwa nri ruo ọtụtụ ụbọchị. Ọ gbasara otu n'ime efere mba Germany na ọ bụ mgbe niile na ụlọ oriri na ọṅụṅụ menu.
Ha bụ mkpịsị ụkwụ ezi ha na-adịkarịkwa ka isi mmadụ. Bụ a anụ anụ, zuru oke ruo mgbe akpụkpọ ahụ na-apụta n'ụzọ dị mfe site n'ọkpụkpụ ma dị nro ma dị ụtọ na akpụkpọ ahụ niile na-egbuke egbuke. Ọ bụ efere ewu ewu na Bavaria.
N'ebe a, a na-agbanye anụ ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị, karịsịa mgbe ịkpụ dị ukwuu. A na-esizi ya ọkụ na obere okpomọkụ ruo ọtụtụ awa, n'etiti abụọ na atọ dabere na nha ya, a na-ejikarị ya na poteto ma ọ bụ kabeeji. Na Munich ọ bụ el nri.
Nri a bụ ụdị nke mpaghara Saxony ma ọ bụ mpịakọta anụ nwere ụtọ dị iche iche. Ndi Mpekere anụ dị gịrịgịrị na ham, eyịm, pickles na mọstadnke a na-esi na mmanya na-acha ọbara ọbara ṅara n'ọkụ, nke na-ahapụ ụtọ dị ụtọ na njedebe nke isi nri.
A na-enye Rouladen nri abalị na sanwichi nduku, poteto a gwakọtara agwakọta, ma ọ bụ kabeeji uhie. Dịka nri n'akụkụ, ị nwekwara ike ịhụ akwụkwọ nri oge, oyi, anụ. Ihendori nke fọdụrụ bụ akụkụ dị mkpa nke efere ma na-awụsa anụ ahụ mgbe niile.
N'agbanyeghị na efere a bụ nke Ọstrịa, na Jamanị ọ na-ewu ewu nke ukwuu. Bụ a cutlet kpuchie na breadcrumbs na cheese na ham n'etitiGịnị bụ Sanwichi, jere ozi na poteto na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ salad.
Kedu ihe ị chere banyere ya stew oke bekee? Ọ bụrụ na-amasị gị stew, Germany bụ maka gị. Stew a na-ahụkarị na mba ndị oyi na-adị ogologo ma na-akpa ike n'ihi na ha na-eri nri dị kalori.
N'okwu a, a na-egbutu anụ oke bekee n'ime nha nha na sha we were yabasị na manya sie nri ruo ọtụtụ awa ruo mgbe ọ na-etolite ma mepụta stew. A na-eji mmanya na mmanya mee marinade ahụ ma jiri ọbara oke bekee mee ya.
Okwu hase na-ezo aka German oke oyibo, oke bekee na pfeffer bụ ose, ọ bụ ezie na ngwa nri ndị ọzọ na condiments na-apụta karịa ose. Na Bavaria, efere a na-agbakwunye ose ma ọ bụ paprika dị ụtọ,
Ọ bụ ezie na anyị kwuru na a pụghị ibelata nri German ka ọ bụrụ sausaji, anyị enweghị ike ịkwụsị ịkpọ ha aha. Enwere a ogologo omenala na mmepụta nke sausaji ma enwere ụfọdụ 1.500 ụdị sausaji. Enwere ọtụtụ ọpụrụiche mpaghara: soseji na-acha ọcha Munich ma ọ bụ soseji anụ ezi na ketchup na-ewu ewu na Berlin.
Sausaji A na-erikarị ha n'okporo ámá, ha bụ nri n'okporo ámá, ma ọ bụ eziokwu na a na-enyekwa ha nri na efere n'ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ọ dịghị mgbe ọ dị oke ọnụ. A na-ahụkarị soseji, dịka ọmụmaatụ, bụ Bratwurst ma ọ bụ soseji grilled.
Ọ bụ nri okporo ámá kacha ewu ewu na mba ahụ: a na-ejikarị anụ ezi na anụ ehi na-eme ya ma na-esi ísì ụtọ na ginger, nutmeg, coliana ma ọ bụ caraway, cumin. A na-asa ya n'akpụkpọ anụ chara acha wee saa ya na mọstad na ketchup. Mgbe ụfọdụ, enwere ike ịtụ ya naanị na ogbe achịcha ma ọ bụ jiri sauerkraut. Bụ a ahụkarị German okpomọkụ efere.
Ụdị soseji ọzọ na-ewu ewu bụ knockwurst ma ọ bụ sie soseji. A na-eji anụ ehi ma ọ bụ anụ ezi mee ya ka ọ dị ka nnukwu nkịta na-ekpo ọkụ. Ma enwere ndịiche n'ihi na ọ kariri nkịta na-ekpo ọkụ na-ahụkarị na ihe ndị dị na ya dị nnọọ mma. soseji a nwere hue pink na a ekpomeekpo dị nro na-ese anwụrụ n'ihi na mgbe o sie ya, ọ na-ese ntakịrị. Efere ya na achịcha na mọstad Dijon.
Sausaji ọzọ ị ga-anwale bụ weisswurst. Ọ bụ sausaji Bavaria omenala mee ya na beef na ham, nke a na-esi na pasili, lemon, eyịm, ginger, cardamom sie ya.
N'ozuzu, a na-eje ozi n'etiti ụtụtụ, dị ka nri nri, ebe ọ bụ na a na-esi ya na mmiri ọkụ, na-enweghị isi ka akpụkpọ ahụ ghara ịgbaji. Mgbe were pretzel were ụfọdụ mọstad dị ụtọ were jee ozihey biya ọhụrụ.
Anyị na-aga n'ihu na sausaji: Currywurst. ụdị soseji German a Emepụtara ya na Berlin na 1949 ma jiri anụ ezi na ketchup sauce na ntụ ọka curry mee ya. O yiri ka ọ bụ ndị agha Britain bụ ndị nọ n'obodo ahụ ka agha ahụ biri, nyere ihe ndị a.
A na-etinye ha n'ọkụ na n'oge a, ha na-ewu ewu nke ukwuu ma enwere ọbụna ụlọ ngosi ihe mgbe ochie gbasara ha. Ha abụọ na Berlin na Hamburg a na-enye ha na fries French ma tinye ha na ogbe achịcha.
Dị ka ị hụworo poteto dị ugbu a na German gastronomyka. Ha batara na obodo ahụ na njedebe nke narị afọ nke XNUMX na ka ọ na-erule narị afọ nke XNUMX ha bụ ndị ama ama. The kartoffelpuffer bụ a eghe nduku pancake, a na-egweri poteto ma gwakọta ya na pasili, eyịm na akwa.
Ọ dị okirikiri ma a na-ejikarị akwa na-eri nri ụtụtụ, ma ọ bụ ihendori apụl ma ọ bụ ude ude.
Ha bụ ahụkarị nduku sanwichi na Enwere ụzọ abụọ maka nkwadebe: ma ọ bụ site na ịgwakọta poteto esiri esi na nke esiri esi ma ọ bụ na poteto esichara ozugbo ruo mgbe a na-eme ka ọ dị ọcha, wee mee obere bọọlụ ndị a na-esi na mmiri nnu.
Ọ bụ nri abụọ a na-ahụkarị na mgbe ụfọdụ a na-eji naanị akwụkwọ nri na-enye ya. Ọ bụrụ na ọ na-aga dị ka nri akụkụ, ha na-agbakwunye ihendori. Ọ bụ nri na-ewu ewu nke ukwuu na ị nwere ike ịmụta banyere akụkọ ihe mere eme ya na Thuringian Sandwich Museum, otu n'ime ụlọ ngosi ihe ngosi kachasị mma nke a raara nye gastronomy.
Ọ dị mfe fermented kabeeji ma ọ dị n’obodo niile. a na-egbutu kabeeji ahụ nke ọma na fermented ruo ogologo oge. Ọ na-adịru ogologo oge na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, n'ihi nje bacteria na-agbakọ sugar na kabeeji.
A na-ejekwa ya dị ka ihe mgbakwunye na efere ndị nwere anụ.
Ọ bụ nri onye anaghị eri anụ, akwa noodles, na ọ na-ewu ewu ọ bụghị naanị na Germany kamakwa na Switzerland, Austria na Liechtenstein. A na-eji ntụ ọka, nke ọhụrụ, nnu na ụfọdụ mmiri oyi na-eme ha n'ụzọ ụlọ.
A na-egbutusị noodles ahụ ma sie ya na mmiri nnu nnu ruo mgbe ọ na-ese n'elu. A na-eji ọtụtụ chiiz gbazere na-enye ha ma emechaa na ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ nri bụ isi n'onwe ya, a na-ejikarị ya eme ihe dị ka ihe oriri anụ.
Ụdị cheese a na-apụta karịa na ókèala Switzerland ma nwee a tọrọ ụtọ ude ude na a siri ekpomeekpo. Ọ bụ ọkara abụba, bọta dị ọcha, ma nwee a isi ísì.
Ọ bụ German version nke pretzel i gha ahu ihu a na-ere ha nke ukwuu n'okporo ụzọ, ụlọ nkwakọba ihe na nnukwu ụlọ ahịa. Ha dị oke, dị ntakịrị nnu yana mkpụrụ sesame dị n'elu. Enwere ike iri ha naanị ya ma ọ bụ na mọstad.
N'ikpeazụ, ọ dịghị onye nwere ike iri nri na Germany na-aṅụghị biya. Germany nwere nnukwu omenala ime biya, nke narị afọ. Pilsner dị iche iche bụ nke kachasị ewu ewu na ihe niile, mana mpaghara ma ọ bụ obodo ma ọ bụ obodo ọ bụla nwere ụdị nke ya.
Bavaria bụ mpaghara biya kacha mara amara ma ebe a ị nwere ike ịnụ ụtọ biya ọka wit. Enwere ụdị dessert German? Ee, nke kuki gingerbread ma ọ bụ lebkuchen, na apfelkuchen ma ọ bụ apụl apụl, strudel na mkpụrụ osisi poppy, pancakes ma ọ bụ kaiserschmarrn, Black Forest Cake, ekeresimesi a na-ezu ohi ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Alemania » Ụdị nri German a na-ahụkarị
Ihe ị ga-ahụ na Andorra n'ime ụbọchị 2 ma ọ bụ 3